I-Terrace, indlu enamagumbi okulala ayi-3 anendawo yokuphola - I-Airbnb
I-Terrace, indlu enamagumbi okulala ayi-3 anendawo yokuphola
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uSteven iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Seta kunxweme olusempuma lwesiqithi esihle saseKoh Chang, eThailand, eTerrace, eBaan Talay Thai
39/9 Moo 2 Dan Mai, Ko Chang, Trat, 23wagen, TH
Ibekwe kwigadi entle yabucala enepuli yabucala neemitha eziyi-50 ukusuka elunxwemeni olufihlakeleyo, indlu yethu enendawo yokuphola enamagumbi okulala amathathu, ikhitshi elikumgangatho ophezulu nendawo yokuphumla enkulu kunye nendawo yokutyela. Ilala abantu abayi-7.
I-Terrace villa inendawo enkulu kakhulu yokuhlala evulekileyo kunye nekhitshi kunye nendawo yokutyela kunye nepaseji ekhokelela kumagumbi okulala amakhulu ayi-3.
Ngaphandle kwendawo yeegadi zetropiki kukho i-7M. ipuli ende enomthombo wengxangxasi ejikelezwe ngamatye asecaleni kwepuli yokutyela, ukuhlamba ilanga, inyama eyojiweyo kunye neepati!
Ithala lophahla liyakwazi ukusetyenziswa ngezitepsi zangaphandle ukuze kuphole ngakumbi ulwandle kunye neentaba.
Kukho amagumbi okulala amathathu amakhulu kakhulu onke ayi-suite.
Igumbi lokulala 1 linebhedi enkulu kunye nebhedi enye eyongezelelekileyo eyenza igumbi lokulala elikhulu losapho xa kuyimfuneko. Igumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle linebhafu ephucukileyo, kunye nendawo enkulu yokungena kuyo kunye neshawa ephindwe kabini
Igumbi lokulala 2 linebhedi enkulu elala abantu ababini eneshawa engaphakathi. isitya kunye nendlu yangasese
Igumbi lokulala 3 lineebhedi ezimbini ezilala umntu omnye neshawa ekwigumbi lokulala, isitya kunye nendlu yangasese.
Iibhedi zabantwana ezongezelelekileyo neekhabhathi zabantwana ziyafumaneka.
Ngaphandle kukho iindawo ezaneleyo zokonwabela isidlo sakusasa esilanga, inyama eyojiweyo yangokuhlwa okanye enye indawo onokuyalela kuyo kwenye yeevenkile zokutyela ezininzi zasekuhlaleni eziza kukuthumelela ukutya kwazo okumuncis 'iintupha kule ndlu.
Ibhedi enkulu eyi-1, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, \_u00A0Iibhedi zeentsana eziyi-2
4.70 · Izimvo eziyi-51
Ibekwe kwiigadi ezintle zetropiki "i-Terrace" yindawo yokuphola yale mihla, ekwiimitha eziyi-50 ukusuka kunxweme lwabucala, kwicala elipholileyo elisempuma lesiqithi esihle saseThailand saseKo Chang.
Xa iintaba zijongwa ngasentshona kunye nolwandle empuma, le ndlu ingcwele ikufutshane nendawo encinci enamakhaya angaphambili aselunxwemeni oluphezulu kakhulu abekwe kwiigadi ezintle kunye namabala
Ukuba ufuna uncedo okanye amacebiso, uncedo lukufutshane ekuthengeni, ekucoceni, ekuhlanzekeni impahla, egadini, ekulungiseni, ekucoceni ipuli, amacebiso ngezokhenketho kunye nemoto kunye nokuqesha isithuthuthu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tambon Koh Chang Tai